धापासी हाइटमा मृत भेटिएकी पुर्णिमाको हत्या ‘प्रेमी’बाटै भएको खुलासा | Citizen FM 97.5 Mhz
Home > समाचार > धापासी हाइटमा मृत भेटिएकी पुर्णिमाको हत्या ‘प्रेमी’बाटै भएको खुलासा
वैशाख ३, टोखा-७ धापासी हाइट जाने बाटोमा मृत भेटिएकी महिलाको आफ्नै ‘प्रेमी’ले हत्या गरेको खुलेको छ । गोरखा घर भएकी पूर्णिमा बिकको हत्या गरेका पर्सा ठोरी घर भइ हाल धापासी बस्ने ३० वर्षीय विजय तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
आइतबार राति साढे ८ बजेतिर धापासी हाइटको करिडोर सडकमा महिला रगताम्मे अवस्थामा भएको खबर पाएपछि प्रहरी टोली पुगेको थियो । मतृक गोरखा घर बताउने करिव ३२/३३ वर्षकी पूणिर्मा विक भएको खुलेको छ ।
श्रीमानले छाडेपछि पछिल्लो समय उनीसँगै काम गर्ने पर्सा ठोरी घर भई धापासी बस्ने विजय तामाङसँग नजिकिएकी थिइन् । सात महिनादेखि लिभिङ टुगेदरमा बस्दै आएका तामाङ र बिक दुबै ज्याला मजदुरी गर्ने हुन् । तामाङ मिश्री हुन् भने विक लेभवरको रूपमा काम गर्दै आएकी थिइन् ।
बेलाबेला कोठामा नजाने गरेका कारण पछिल्लो समय पूणिर्माप्रति शंका लागेको विजयले बयान दिएका छन् । आइतबार पनि कोठामा जान आग्रह गरेको तर, नमानेपछि आफूले ढुंगाले हानेको उनले प्रहरी समक्ष स्वीकार गरे ।
युवतीको टाउकोमा ढुंगाले लागेर गहिरो चोट छ । मृतक युवतीको शवलाई पोष्टमास्टर्मका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लगिएको छ ।
१० लाख बिरामीलाई जाँचीसकेका र कैयौंलाई जीवन दिएका बरिष्ठ न्युरोलोजिस्ट डा. देवकोटाको यति ठुलो चाहना !
संसद्को सरकारलाइ प्रश्न, भूकम्पपीडितमाथि किन मजाक गरिंदैछ ?
जनकपुरधामको साँचो मोदीलाई बुझाउदै केपी ओलीले ??किन बुझाए साचो ! खुल्यो एस्तो रहस्य